बुटवलमा कोरोनाको आशंकामा एक युवा अस्पताल भर्ना
बुटवल, २९ फागुन। कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा बुटवलमा एक जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताएका अनुसार बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा २१ वर्षका एक युवकलाई अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
ती युवकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा देखिने लक्षणहरु देखिएका छन्। ‘कडा किसिमको निमोनिया देखिएको छ, कोरोना संक्रमणका कारण देखिने लक्षणहरु देखिएका छन् ।’ उनले कोरोना नै होकि होइन भनेर पूर्ण परीक्षण गर्न बाँकी रहेको बताए। नमूना परीक्षणका लागि उनको रिपोर्ट काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
उनलाई बिहीबार मात्रै अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भएका बिरामीलाई उपचारका लागि २ वटा आइसोलेशन वार्ड तयारी अवस्थामा राखिएको डा.थापाले बताए।
प्रदेश ५ का १० वटा अस्पतालमा आइसोलेशन बेड
यद्यपी अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा कोरोना पुष्टि भएका संक्रमित भने भेटिएका छैनन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ का १० वटा अस्पतालमा यसको तयारीका लागि आइसोलेशन बेड तयार पारेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा २ वटा क्याबिन आइसोलेशन बेडका रूपमा छुट्याइएको अस्पतालमा मेसु डा राजेन्द्र खनालले बताए।
यसैगरी भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा डा. प्रकाश थापा, पृथ्वी चन्द्र अस्पताल, परासीमा डा. पवन अग्रहरी, तौलिहवा अस्पताल डा. गणेश क्षेत्री, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. सदिक्षा योगी, देवदह मेडिकल कलेज डा. सुन्दर पाण्डे, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा डा. दीपक भण्डारी, युसिएमएस भैरहवामा डा. नविनजंग रायमाझी, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा डा. सुन्दरजंग शाह र मिसन अस्पताल पाल्पामा डा. गजेन्द्र नेपालीलाई तोकिएको छ।